HomeWADADANidaamyada Tire WheelsMetrobus
Wararka BRT, shilalka BRT, khariidadaha BRT, khadadka BRT, xayeysiinta BRT ee hadda iyo xaraashka
IETT waxay horumar ka sameysay khadadka sida ugu badan loo soo gudbiyo shaqooyinka ay ka qabato warbixinnada cabashada. Hawlaha caadiga ah ee la qabtay darteed, waxaa jiray 8,6 boqolkiiba cabashooyinka iyo 3 boqolkiiba hoos udhaca cabashooyinka guud. Istanbul [More ...]
IETT waxay heshiis la saxiixatay Rugta Injineeriyada farsamada gudaheeda iyada oo la fiirinayo baaxadda iyo kormeerka basaska. Markaa, jawaabaha su'aalahan waxaa bixiya hay'ad madax-bannaan marka laga reebo xisaabiyaha IETT iyo shirkadaha qandaraasleyda dayactirka. [More ...]
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu ayaa furay Bandhigga Buugga Caalamiga ah ee CNR 7aad. Khudbadiisi furitaanka, wuxuu yidhi, "Waxaa jira waxyaabo aan inagu gaadhsiin doono adduunka. Danaha gaarka ah ee buugga ama dal [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istaanbuul (IMM) waxay tirtiraysaa metrobus-ka, kaasoo noqday qayb lama huraan u ah nolosha Istanbulites, waana mowduuca kaftanka iyo wadaaga sababa la xiriira dhererka iyo cufnaanta xariiqda. IMM, oo dardar gelisay dib u cusbooneysiinta saldhigyada ay cufnaanta ay la kulmaan, waa Madaxweynaha IMM. [More ...]
Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Duulista Magaalada Istanbul İbrahim Orhan Demir ayaa sheegay in daraasadaha cilminafsiga ah loo sameeyo dhamaan wadayaasha si loo sii yareeyo shilalka ka dhaca khadka tareenka. Iron. “7/24 [More ...]
Khadadka metrobus, oo qaada qiyaastii 1 milyan oo rakaab ah inta u dhaxaysa laba qaaradood maalin walba, gawaarida waxaa dib loogu cusbooneysiin doonaa awood sare, iyo basas raaxo leh. Marmaray waxay aad ugu firfircoon tahay helitaanka xariiqa xariiqda halka ballaarinta saldhiga ay dardargeliso. [More ...]
Tirada Safarada Metrobus Oo La Kordhiyey
IMM waxay kordhisay tirada gawaarida iyo safarada qadka metrobus marka loo eego bilihii qaboobaha ee sanadkii hore. Celcelis ahaan 20 gawaarida ayaa yimaada saldhigyada inta lagu jiro saacadaha ugu badan. Wixii 300 basas cusub oo lagu beddelo baabuurta duugga ah [More ...]
Codsigan cusub oo ay soo saartay shirkadda iskaashatada ee Magaalaweynta Istanbul (İBB) ee BELBİM A.Ş., dadka deggan magaalada Istanbul waxay awoodi doonaan inay ku raacaan baabuurta dadweynaha dadweynaha iyagoo adeegsanaya nidaamka xogta macluumaadka ee taleefannadooda gacanta. TUYAP waxaa soo qabanqaabiyay Dalxiiska Caalamiga ah ee Bariga Mediterranean iyo Carwada Safarka (EMITT) [More ...]
Goobta ugu Nabadda badan ee Magaalada Istanbul Eyüpsultan Waa meesha ugu Mushaharka badan mitrooga
Ururka Caafimaadka Maskaxda wuxuu baarey wadaaga shucuureed ku saleysan ee shakhsiyaadka ku jira arjiga 'CheckFeel', wuxuuna khariiday khariidadda dareenka meelaha lagu ciyaaro ee Istanbul. Iyada oo dalabka uu gaarayo ku dhawaad ​​10 kun oo adeegsadeyaal ah, shucuur ayaa lagu wadaagay 150 kun oo meelood. Ururka [More ...]
Khariidadda Istanbul Metro Map Waxaan soo uruurinay dhammaan macluumaadka hadda socda ee ku saabsan Waddooyinka Magaalada Istanbul iyo Waddooyinka Magaalada Istanbul. Magaalada weyn ee Istanbul, oo ay maamusho Metro Istanbul, waxay u adeegtaa M1, M2, M3, M4, M5, M6 iyo M7 Metro. [More ...]
Waa maxay Metrobus?
Metrobus waa gaadiid dadweyne oo ay dhiseen isku dhafka metrooga iyo baska. Waxay ka shaqaysaa xargaha loo qoondeeyey iyada oo leh giraangiraha caagga ah. Asal ahaan waa haad u gaar ah, sidaa darteed si dhakhso leh ayey taraafikada ugu jirtaa. [More ...]